Andinin-teny hivavahana rehefa iharan'ny fanafihana ianao. TOKO VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly Andinin-teny hivavahana rehefa iharan'ny fanafihana ianao
Andinin-teny hivavahana rehefa iharan'ny fanafihana ianao
Androany izahay dia hampianatra amin'ny soratra masina hivavaka rehefa iharan'ny fanafihana ianao. Mampitandrina antsika ny soratra masina mba tsy hiala amin'ny vavaka, fa ny fahavalontsika dia toy ny liona mierona mitady izay harapany. Izany no maha-zava-dehibe ny mivavaka lalandava mba tsy hianjady amin'ny fakampangan'ny fahavalo isika. Iray amin'ireo fomba fakampahan'ny fahavalo ny finoan'ny olombelona ny alàlan'ny fanafihana ara-panahy.
Mety hisy ny fanafihana amin'ny nofinay. Indraindray matory isika ary mahita ny tenantsika notafihin'ny hery tsy hita maso sasany. Indraindray dia mety ho aretina mahatsiravina. Tsy misy fomba tsy hanafihan'ny fahavalo antsika. Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i Efesianina 6:12 Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny mpitondra, amin'ny fanjakana, amin'ny fanjakana amin'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny lanitra. Mitolona amin'ny fahefana sy ny mpitondra ny maizina isika. Tsy maintsy avelantsika hilatsaka ny mpiambina antsika.
Rehefa mivavaka manohitra ny fanafihan'ny fahavalo isika dia zava-dehibe ny fampiasantsika ny soratra masina. Tao amin'ny lahatsoratray teo aloha, nasongadinay ny maha-zava-dehibe ny mivavaka miaraka amin'ny soratra masina. Isaky ny mivavaka isika rehefa iharan'ny fanafihana ara-panahy dia mila herim-po sy finoana isika. Mahazo herim-po sy finoana bebe kokoa isika amin'ny alàlan'ny mivavaka miaraka amin'ny soratra masina. Ny bokin'i Hebrio 4:12 Fa ny tenin 'Andriamanitra dia mailaka sy mahery ary maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fizarazarana ny fanahy sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahalala ny eritreritra sy ny fikasan'ny ny fo. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra isika manoloana ny olana dia manamafy ny fanahintsika fanahy isika ary mitombo ny fanantenantsika an'ny Tompo.
Isaky ny lavon'ny fanafihan'ny fahavalo ianao dia ireto misy andinin-tsoratra masina 10 hivavahana
Salamo 23: 1-5 Iaveh no mpiandry ondriko; Tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ahi-maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano mangina. Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin'ny làlan'ny fahamarinana noho ny anarany. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko; Ny tsorakazonao sy ny tehinao dia mampionona ahy izany.
Manaiky ny salamo fa mpiandry Andriamanitra ary ianao no ondry. Andriamanitra izay mpiandry dia hanome izay rehetra ilaintsika ary miaro antsika amin'ny hoho sy ny nifin'ny amboadia, hyena ary ny biby mpiremby hafa rehetra. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao dia mampionona ahy izany. Ity ampahany amin'ny soratra masina ity dia manampy antsika hanana herim-po fa na dia mety mamakivaky ny lohasahan'ny fahafatesana aza isika, na amin'ny alàlan'ny aretina na fahoriana, dia tsy matahotra isika satria momba antsika Andriamanitra ary hampionona antsika Izy amin'ny olantsika.
Salamo 28: 1-4 Hitaraina aminao aho, ry vatolampiko ô; aza mangina amiko, fandrao raha mangina amiko ianao, dia ho tonga tahaka izay midina any an-davaka aho. Henoy ny feon'ny fifonako, raha mitaraina aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin'ny fitoeranao masina aho. Aza manery ahy hiaraka amin'ny olon-dratsy sy amin'ny mpanao meloka, izay milaza fihavanana amin'ny mpiara-monina aminy, fa zava-dratsy no ao am-pony. Omeo azy araka ny asany sy ny faharatsian'ny asany izy; omeo azy araka ny asan'ny tànany izy, omeo azy ny taniny lao.
Izany dia vavaka fangatahana fanampiana avy amin'ny Tompo. Izahay dia milaza izany mba hitadiavana fanampiana sy fialofana amin'ny tompo rehefa ory na iharan'ny fanafihana isika. Voalaza ao fa raha mangina amiko ianao dia ho tonga tahaka ireo izay midina any an-davaka aho. Voalaza ao hoe omeo ny ratsy fanahy sy ny mpanao ratsy araka ny asany. Midika izany fa avelao ny ratsy izay kasain'izy ireo ho azy ireo. Rehefa mahatsapa ianao fa iharan'ny fanafihana na iharan'ny fahoriana lehibe dia iray amin'ny soratra masina vakina ny Salamo 28.
Deoteronomia 28: 7 Hataon'i Jehovah resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao; lalana iray no hivoahany hamely anao ary handositra amin'ny lalana fito ianao.
Tokony ampianarinao manokana ity vavaka ity. Hataon'i Jehovah resy eo imasoko ny fahavaloko izay mitsangana hanohitra ahy. Mivavaha mafy amin'ireto andinin-tsoratra masina ireto mba hahazoanao fandresena. Ho menatra izay rehetra nanafika anao.
Salamo 91: 7 Izay mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny Avo Indrindra Dia mitoetra eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha.
Salamo 91: 4-13 hosaronany volom-borona ianao, ary ao ambanin'ny elany no hialofanao; ny fahamarinany no ho ampinganao sy fiarovana. Tsy hatahotra ny horohoro amin'ny alina ianao, na ny zana-tsipìka manidina nony andro, na ny areti-mandringana ao amin'ny maizina, na ny areti-mandringana amin'ny mitataovovonana. Mety hisy arivo lavo eo anilanao, iray alina eo ankavananao, fa tsy hanakaiky anao izany. Ny masonao ihany no ho hitan'ny masonao, Ka ho hitanao ny famaizan'ny ratsy fanahy. Fa hoy ianao: Iaveh no fialofako, ary ny Avo Indrindra dia nataonao fonenana, ka tsy hisy loza hanjo anao, ary tsy hisy loza hanakaiky ny lainao. Fa Izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiambina anao amin'ny lalanao rehetra; Hitrotro anao eny an-tànany izy, fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao. Hanitsakitsaka ny liona sy ny kobra ianao; hohitsahinao ny liona lehibe sy ny menarana.
Ny fomba tsara indrindra hivavahana amin'ny tenanao amin'ny toe-javatra rehetra dia amin'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra. Ny fampahatsiahivana an Andriamanitra ny fampanantenany dia manosika antsika hiasa. Nampanantena Andriamanitra fa hosaronany volony isika ary eo ambanin'ny elany no hialofantsika. Arivo no hianjera eo ankavanantsika ary iray alina eo ankaviantsika fa tsy hanakaiky antsika izy ireo.
Salamo 35: 1-4 Mifandahatra amin'ireo mifandahatra amiko, Jehovah ô; miadia amin'ireo miady amiko. Raiso ny ampinga sy ny fiadiana; Mitsangàna, ka avia hamonjy ahy. Lefona maranitra sy lefom-pohy ireo manenjika ahy. Lazao amiko hoe: Izaho no mpamonjy anao. Aoka ho menatra sy hangaihay izay mitady ny aiko; Enga anie ka hiverina amin-tahotra izay manisy ratsy ahy.
Ity dia soratra masina nosoratan'i David rehefa nianjera tamin'ny fanafihana izy. Niangavy an’Andriamanitra izy mba hitsangana hiady ho azy. Miadia amin'ireo miady amiko, miadia amin'ireo miady amiko. Amin'izany koa, mangataka amin'Andriamanitra ianao mba handray fitaovam-piadiana ary hiady amin'ireo izay tsy hamela anao hiala sasatra.
Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny fanafika rehetra ataon'ny fahavalo dia hofoanana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa voasoratra fa tsy hisy fitaovam-piadiana hamely antsika. Mandidy ny anaran'i Jesosy aho, ny zana-tsipìka rehetra nitifitra anao dia nofoanana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny soratra masina dia milaza fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo mandrakariva ny marina ary ny sofiny mihaino tsara ny vavak'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny masonao dia hibanjina ahy mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandidy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny lehilahy na ny vehivavy rehetra izay manao ady amin'ny fiainako, dia ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, mivavaka aho mba hanampianao ahy. Mangataka aho amin'ny famindram-ponao ianao hanafaka ahy amin'ny tanan'ilay lehilahy mahery manahirana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
soratra masina hivavaka
Previous lahatsoratraAzo ovana ve ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka?
Next lahatsoratra20 fampanantenan'Andriamanitra hivavaka rehefa mila herim-po sy tanjaka ianao
frenando cortes rios 26 jona 2021 Amin'ny 1:44 hariva
buenos días hermano en la luz de cristy feliz de ver parte de tu interpretación en la palabra de dios bendiciones
20 Ireo teboka amin'ny vavaka amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly
30 Tantaram-bavaka ho an'ny toe-javatra tsy azo tanterahina
Vavaky ny ady ho an'ny fifamaliana